Video _ TS waa nooc ka mid gaaban Video Gaadiidka System oo asal ahaan waa qaab-dhismeedka buuga u movie DVD ah a. Aqlabiyadda ee DVD-yadu waxay ka kooban yihiin laba fayl ee buugga tusaha xidid iyo kuwani waa - AUDIO_TS iyo VIDEO_TS. Folder ayaa sida Video _ TS magacaabay waxaa ku jira dhammaan macluumaadka ee DVD ku saabsan ay loo maqli karo iyo xogta. Folder ayaa sidoo kale ku jira macluumaad ku saabsan files gurmad (.BUP), wax video (.VOB) iyo macluumaad files (.IFO). Markaa waxaan dhihi karaa in dhammaan macluumaadka video la xiriira in DVD ah waxa lagu kaydiyaa Video _ TS folder halka dhammaan macluumaadka la xiriira audio waxaa ku kaydsan Audio _ TS. Video A caadi _ TS folder eegi doonaa wax la mid ah ka hooseeya.
In kastoo Video _ TS waxaa la ciyaari karaan kombiyuutarada iyo ciyaartoyda DVD laakiin haddii aad rabto in aad ku raaxaysan filimada iyo videos la Video _ TS folder on kombuyuutarrada gacanta sida iPhone, PSP, Madaxweyne Siilaanyo 360, ciyaartoyda MP4, kiniin Android iyo kuwa kale oo aad, markaas waxaad u baahan doontaa in la beddelo qaab ka Video _ TS in MP4. Mid ka mid ah qaabab ugu badan oo si weyn loo aqbalay video loo maqli karo waa MP4 iyo sidaas Video _ TS diinta MP4 ka dhigi doonaa video ay heli karaan qalabka oo dhan. Conversion ka Video _ TS in MP4 waxaa sidoo kale loo baahan yahay in xaaladaha marka aad leedahay si aad xaalkaa video ah oo la isticmaalayo Final Cut Pro ama iMovie.
Waxaa jira software badan iyo qalab adeeg oo caawiya si loogu badalo Video _ TS in MO4 on Windows iyo Mac iyo hoos waa qaar ka mid ah macluumaad dheeraad ah ee la mid ah.
Part1: VIDEO_TS Best in MP4 Video Converter
Part2: VIDEO_TS Free in MP4 Video Converter
Part3: Aqoonta Extended u VIDEO_TS
In kastoo ay jiraan converters badan oo laga heli karo suuqa kaa caawinaya in aad si loogu badalo VIDEO_TS in MP4, laakiin haddii aad raadinayso mid ka mid ah fursadaha ugu fiican, ka dibna Wondershare Video Converter Ultimate cadayn doono inuu yahay dooqa ah badnaayeen. Software cajiibka ah ee la heli karo Windows iyo sidoo kale qalabka Mac oo la oran karo waa mid dhammaystiran aad video qalabeed in ay qaban karaan wax kasta oo aad u baahan tahay si ay u sameeyaan oo ay daawadaan videos ah. Converter waa awood diinta videos in qaabab kala duwan iyo sidoo kale u dhoofin karaan qalabka kale. Qaar ka mid ah qaababka ugu waaweyn ee software-ka waa kuwan hoos ku xusan
30 jeer diinta dhakhso ah videos: Sida la barbar dhigo converters kale ee ay category, Video Converter Ultimate waa 30 jeer ka dhakhsi oo sidaas waa inaad badalo kartaa videos wax waqti ah gudahood.
Kala duwan Wide ee computability: Marka ay timaado in Video Converter Ultimate, ma dhici doonto in ay ka welwelaan arrimaha ku saabsan waafaqsan, sida software ka taageeraa in ka badan 150 qaabab oo sidaas waa ugu user saaxiibtinimo xal. Ayaa qaab 4K video ugu dambeeyay ayaa waxaa sidoo kale ay taageerayaan Converter u bixiyaan tayada sawirka aad u fiican.
Dhisay-In taageero DLNA: plugin ayaa warbaahinta server ee Video Converter Ultimate kuu ogolaanaya in aad ku aaladaha in ay yihiin DLNA shahaado sida PS3, Madaxweyne Siilaanyo 360 kala duwan ee warbaahinta, DLNA taageeray barnaamijyada moobiilllada iyo kuwa kale. Oo sidaas waa inaad ka heli karaan dhammaan faylasha computer aad ee qalabka kala duwan.
Media geeyo: Video Converter Ultimate sidoo kale awood u hoorto files warbaahinta la joogo aad kombuutarka si toos ah in aad TV smart ama TV ee caadiga ah la isticmaalayo Chromecast ama streamers kale ee warbaahinta.
Video wareejinta aan USB: Video Converter Ultimate aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan videos in aad qalabka la qaadi karo iyadoo la isticmaalayo network WiFi heli karo.
In kor loo qaado si aad warbaahinta: Ka sokow diinta iyo degsado, Video Converter Ultimate sidoo kale kuu ogolaanaya in aad xaalkaa, shakhsiyeeyo iyo sidaas kor loogu qaado warbaahinta aad. Qaar ka mid ah qaababka aad isku dayi kartaa iyada oo software waxaa ka mid ah goo, Oo nuurka, saturation, darsamaan, bedelkeeda, dalagga, saamaynta gaar ah, grayscale iyo kuwo kale oo badan.
Karti Sare Video codec (HEVC): software wuxuu taageeraa HEVC waa H.265 iyo bedeli heerarka H.264 iyo sidaas taageertaa tayo sare leh xitaa marka la riixo Labo.
YouTube videos download, Waayo, kuwii ku caashaqi jiray YouTube, Video Converter Ultimate u ogolaanaya in ay soo bixi ku videos YouTube kaliya click hal.
Ka hadalka si gaar ah oo ku saabsan qaab VIDEO_TS, software Wondershare tani waxay u oggolaanaysaa in aad si loogu badalo videos in ay MP4, AVI, MOV, MKV iyo qaabab kale oo aan khasaaraha ka mid ah oo tayo leh. Waxa kale oo uu fududeeyaa fiican oo goobaha loogu PSP, iPhone, iMovie, FCP iyo kuwa kale.
Wixii user Windows, software ah ayaa sidoo kale diyaar u ah version ah tijaabo lacag la'aan ah.
• diinta 30 jeer ka dhakhsi ah videos. Geeyo Media
• kala duwan Wide ee computability. Dhisay-In taageero DLNA
• Video wareejinta aan USB. In kor loo qaado warbaahinta aad
• Karti Sare Video codec (HEVC)
1.2 Sida loo Beddelaan VIDEO_TS in MP4 Isticmaalka Wondershare Video badaley Ultimate
Hoos siiyo waa talaabada ugu by tilmaamaha tallaabo si loogu badalo VIDEO_TS toMP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate
Tallaabada 1 Download, rakibi iyo Wondershare Video Converter Ultimate furan
Tallaabada ugu horaysa waa in aad kala soo bixi, rakibi iyo furi software Wondershare Video Converter Ultimate aad PC / Mac. Screen guriga A sida hoos ku muuqan doonaa.
Tallaabada 2 Import VIDEO_TS files
Hadda tallaabada xigta waa inaad kala soo baxdo files VIDEO_TS in ay software this. Dajinta faylasha la samayn karaa laba siyaabood. Jidka koowaad waa in guji ikhtiyaar ah "DVD Load" joogo dhinaca bidix ee boga ka dibna dooro files in aad rabto in aad soo dhoofsadaan. Habka labaad ee dajiyaan files VIDEO_TS waa si toos ah iyaga jiidayeen ka PC in interface ee software-ka. Mid ka mid ah wax u baahan in la xusuusto waa in Video Converter kama dambaysta ah ayaa sidoo kale taageertaa diinta Dufcaddii.
Tallaabada 3 Dooro qaab Output sida MP4 ah
Marka files VIDEO_TS waxaa lagu keeno, waxaad u baahan tahay in ay doortaan qaab aad jeceshahay inaad ku beddelato faylasha. Tag ah "Qaabka Output" joogo suuqa kala dhinaca midig ee bogga software ah. Dhibic A hoos liiska muuqan doonaa isha of - Qaabka, Device oo jecel. Si fudud u dooro qaab MP4 ah, u tag Qaabka> Video> MP4.
Haddii aad jeceshahay inaad ku beddelato file ee qalab gaar ah sida iPhone, iPad ama wax kasta oo kale oo aad u tegi kartaa doorashada u fiican tahay qaab wax soo saarka for. Si fudud u tag "Device" oo dooro mid ka mid ah oo aad doorato.
Tallaabada 4 Beddelaan video ah
Marka MP4 la doorto sida qaab wax soo saarka, guji "Beddelaan" ikhtiyaar in bilaabi doonaa hab-socodka ah ee diinta.
Marka faylasha loo rogaa, waxaad iyaga ka arki kartaa adigoo u socda "Folder Open".
Sida loo Converter Video_TS in Converter MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah)
2.1 Wondershare Video Converter Free iyo List ah oo ay Features Key
Haddii aad raadinayso doorasho xor ah si loogu badalo files VIDEO_TS si aad u MP4 markaas Wondershare Video Converter Free cadayn doono inuu yahay doorasho kaamil ah. Ka sokow isagoo xor ah, software tani ay tahay mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo badalo kartaa wixii video iyo sidoo kale audio aan xad. Oo sidaas waa inaad ku raaxaysan karaan videos aad jeceshahay on qalab kasta oo aan ka werwerayn oo ku saabsan in sharcigaasi waafaqsan qaab. Software ka shaqayn kartaa Windows iyo sidoo kale nidaamka Mac iyo sokow diinta ay timaado ka buuxaan liiska hufan mid ah qaababka sida hoos ku siiyo.
Fast xawaaraha diinta: Tan iyo Wondershare Video Converter Free ka dhigaysa isticmaalka NVIDIA CUDA iyo AMD technology ugu dambeeyay oo ay la socdaan Multi-Core taageero processor, xawaaraha diinta ee files ee waa mid aad si degdeg ah oo ilaa 30 jeer ka dhakhsi marka loo eego tartanka duurka isla.
Taageer qaabab kala duwan: software ayaa u bedeli karaan videos tayo fiican leh in qaabab badan oo ay ka mid yihiin free video in flash, si xor ah u MPEG video, in 3GP, si AVI, AVI in MP4, MKV in AVI, FLV in MP4 iyo kuwo kale oo badan.
Qalabka tafatirka cajiib ah, ka sokow aad diinta videos, Wondershare Video Converter Free sidoo kale awood u qaadidda aad video-aragnimo ay timaado ka buuxaan liiska qalabka tafatirka. Oo sidaas waa la isticmaalayo software aad jar karaa qaybta aan la rabin, midowdo clips ah, ku dar saamaynta gaar ah, noola qataarrada madow oo wuxuu oofin Dhibaatooyinka kale ee shakhsi. Software wuxuu kuu ogol yahay in Cinwaan kuwan raadkaygay audio sida looga baahan yahay iyo sidoo kale u saamaxaaya in ay ku darto SRT, SSA subtitles si wax soo saarka video.
Download ka YouTube iyo goobaha kale: Wondershare Video Converter Free kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi jecel videos aad ka goobood oo kala duwan oo online oo ay ku jiraan YouTube, Wontube iyo kuwa kale. Geedi socodka waa run ahaantii fudud, aad leedahay si aad kaliya ku dar URL ka video online, go'an qaab wax soo saarka sida aad looga baahan yahay iyo video la soo bixi doonaa.
2.2 Sida loo Beddelaan VIDEO_TS in MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loogu badalo VIDEO_TS in MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Free
Tallaabada 1 Download, rakibi iyo furi software
First of download oo dhan, iyo rakibi furo Wondershare Video Converter Free software aad Mac o PC. Screen guriga A sida hoos ku muuqan doonaa.
Tallaabada 2 Import faylasha VIDEO_TS
Hadda waxaad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan files VIDEO_TS in ay software ah. Waxaad sidoo kale soo dhoofsadaan karo files adigoo gujinaya ikhtiyaar ah "Add Files" ama sidoo kale iyaga jiidi karaan ka your computer si interface ee software-ka.
Tallaabada 3 Dooro sida qaab wax soo saarka MP4
Marka files waxaa lagu soo xulay oo laga keeno, waxaad u baahan tahay in ay doortaan qaab wax soo saarka sida MP4 ah. Waayo, tan u "Qaabka Output" suuqa kala dhinacaaga midig tagaan. Dhibic A hoos menu muuqan doona iyo tan menu dooro Qaabka> Video> MP4.
Xaaladdan haddii aad diinta faylka faylka gaar ah, waxaad dooran kartaa qaab beddelidda, qalab gaar ah. Waayo, tan u tagaan "Device" tab iyo dooro mid ka mid ah sida aad u baahan yahay.
Tallaabada 4 VIDEO_TS badalo si MP4
Marka qaab wax soo saarka si ay u MP4 la soo xulay, guji "badalo" ikhtiyaar in bilaabi doonaa hab-socodka ah ee diinta.
1. Waa maxay file VIDEO_TS?
Marka aan ka hadlo VIDEO_TS files, ay guud ahaan qaab waa filim DVD ay ku jiraan macluumaad ku saabsan video ah. Foomka waxaa ka buuxda VIDEO_TS waa Video Gaadiidka System iyo folder inta badan ka kooban 3 files waaweyn ee VIDEO_TS.BUP, VIDEO_TS.IFO iyo VIDEO_TS.VOB.
VIDEO_TS.VOB (files shay): files waxa ku jira qaybta ugu weyn ee xogta la joogo in DVD ah oo ay ku jiraan video dhab ahaan, xogta audio, subtitles iyo macluumaad kale.
VIDEO_TS.IFO (warbixin files): files waxay u badan ku jiraan macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan DVD iyo files VOB ay. Files sidaasay leeyihiin xog ku saabsan sida ay u macluumaadka waa in lagu shubto marka DVD la geliyo, qalimaan cutubka DVD, DVD amarrada by user oo kale.
VIDEO_TS.BUP (files gurmad): files Kuwaasu waa koobiyada faylasha IFO oo asal ahaan ka shaqeeyaan sidii gurmad marka macluumaadka files asalka uu helo musuqmaasuqa iyo in aan la akhriyi karin.
Markaa waxaan dhihi karaa in VIDEO_TS asal ahaan waa gal ah in ka kooban yahay dhammaan macluumaadka ku saabsan videos ee DVD ah.
2. Sidee u ciyaaro VIDEO_TS daaqadaha iyo Mac?
Hoos siiyo jira siyaabo aad kaas oo ka ciyaaro oo wuxuu ku raaxaysan VIDEO_TS aad Windows iyo Mac.
1) By isticmaalaya ciyaaryahan VIDEO_TS ah:
Mid ka mid ah jidka u ciyaaro VIDEO_TS ah oo ku saabsan habka waa adigoo isticmaalaya ciyaaryahan VIDEO_TS sida Wondershare Player. Ciyaartoydan taageeraan inta badan ee audio iyo sidoo kale qaabab video ay ka mid yihiin VIDEO_TS ah oo kuu ogolaanaya in aad sidaas u ciyaaro videos aad isagoo ah files VIDEO_TS.
2) By diinta files si qaab socon:
Si kale u ciyaaro ah files VIDEO_TS aad Windows iyo Mac waa ay diinta files si ay u qaab kaas oo la jaan qaada aad PC. Waxaad isticmaali kartaa sida software ee Wondershare Video Converter Ultimate ama Wondershare Video Converter Free si loogu badalo files VIDEO_TS si aad u MP4 iyo qaabab kale oo lagu dhegeysan in uu noqon karo ciyaaryahanka ku saabsan nidaamka Windows iyo Mac.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan VIDEO_TS in MP4 on Windows iyo Mac